WARBIXIN:- Maxaa soo cel celiyay weerarada Shabaab ee Bariire ? – Balcad.com Teyteyleey
WARBIXIN:- Maxaa soo cel celiyay weerarada Shabaab ee Bariire ?
By Abdi Malik	 On Oct 6, 2017
Ururka Al-Shabaab ayaa kordhiyay culeyska ay saarayaan degaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii Todobaad gudihiisa ay weerareen laba jeer, halkaasi oo uu ka dhacay dagaal aad u qaraar.
29-kii September Jimcihii ina dhaaftay Al-Shabaab ayaa Saddex jiho ka weeraray laba xero oo Ciidamada Dowladda ay kaga kala sugnaayeen Bariga iyo Galbeedka Bariire, Waxaana intii uu socday dagaalkaasi la maqlay qaraxyo waa weyn, Qaraxyadan laba ka mida waxay ka dhasheen baabuur Madooyinka qarxa laga soo buuxiyay.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa shalay oo Khamiis aheyd xilli aroor ah waxa ay weerar saf balaraan ah ku ekeeyeen fariisin Ciidanka Dowladda ay ku leeyihiin degaanka Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo uu ka dhacay dagaal socday laba saacadood.
Afhayeenka Ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raagge (Cali Dheere) ayaa sheegay ujeedka weerarada degaanka inuu ahaa sidii ay ugu aargudi lahaayeen dad shacab ah oo Diyaarado dagaal ay ku duqeeyeen degaanka Sheekh Axmed Yare oo dhaca duleedka Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Hadal kaas ka duwan waxaa qaba Gudoomiye Ku xigeenka Dhinaca Ammaanka ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose Cali Nuure Maxamed waxa uu Risaala u sheegay in Shabaab ay markasta u taagan yihiin, sidii ay u dhibaateen lahaayen shacabka Soomaaliyeed.
Dadka reer Bariire oo ku jahwareersan sida ay xaaladu tahay, ayaa ku sheegaya in weerarada Shabaab ee degaanka Bariire uu wax badan ka bedelay noloshii caadiga ahayd ee degaanka ka jirtay, maadaama ay sheegeen mar walba in ay filan karaan dagaal, sidoo kalena Shabaab ay jareen Buundadii degaanka.
Dadka Odorosa arrimaha ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan weerarada Shabaabka ee degaanka Bariire in ay soo cel celiyeen dayacaad amni oo ka jirta dhanka saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada ku sugan degaanka Bariire.
Sidoo kale waxa ay sheegeen saraakiisha in laga doonayo marka hore in ay lahaadaan qorshe ah ka hortag iyo ka daba tag, taasina aysan muuqan, oo Shabaabna ay u sahleyso in ay soo weeraraan degaanka.
Saldhigga Shabaabka ay weerareen ee Bariire ayaa waxa uu yahay mid ay adag tahay in weerar lagu galo, maadaama si aad ah loo dhisay, inkastoo ay jirto isdhigasho dhinaca Ciidamada Dowladda ah, kuwaasi oo uu tababaray Howlgalka Bancroft ee Mareykanka.
Saddexdii bishan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, oo lagu daaweynayo Askartii ku soo dhaawacantay dagaalkii 29-kii September ka dhacay degaanka Bariire.
Degaanka Bariire ee dagaalada ay ka dhaceen ayaa Ciidamada Dowladda waxa ay ururka Al-shabaab kala wareegeen 19-kii August ee sanadkan, kadib dagaal adag oo ay la galeen.
Degaanka Bariie hadii aan dib u milicsano waxaa lagu xusuustaa dhacdadii Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka iyo kuwa Mareykanka ay ku dileen 10-kii qof oo rayid ah 25-kii August ee sanadkan maalin Jimco aheyd.
W/Q:- Abdirashiid Ali Dubbad Gacal
The post WARBIXIN:- Maxaa soo cel celiyay weerarada Shabaab ee Bariire ? appeared first on Ilwareed Online.
Masar: “Saldhig uu Turkiga furay Muqdisho waa mid ka dhan ah danaheena”
Shirkii 3-aad ee Qurbajoogta Puntland ee Yurub oo Maanta ka furmay Copenhagen+Sawiro